Uhambo oluya kwi-High Quality Quality Experiences - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Uhambo oluya kwiiNqanaba eziPhezulu zeNgcaciso kwi-Internet
Uhambo oluya kwiiNqanaba eziPhezulu zeNgcaciso kwi-Internet
UMTHETHO: Stefan Lederer, i-CEO kunye nomseli-ntsebenziswano kwiBitmovin
I-multi-screen, i-multi-platform yehlabathi esiphila kuyo iye yandisa ngokukhululekileyo ukulungelelaniswa kwamava abajonga ngayo umxholo. Abaphulaphuli banokubukela yonke into esuka kwimidlalo ebukhoma ukuya kufaka iifrimu zexesha elide kwi-smartphone, ukuvumela abathengi ukuba bajonge nayiphi na into, nayiphina indawo nangaliphi na ixesha. Njengesivumelwano sokuthi ukusasazeka okudumile kunjani, le Super Bowl yonyaka iphula iirekhodi ezintsha ngokusakaza. Izixhobo ezikhethekileyo ze-7.5 zirhwebe umdlalo - ukwanda kwe-20% kumanani omnyaka odlulileyo. Ukongezelela, amanqanaba okubandakanya kunye nomxholo owenziwe ngabadlali abakhulu be-SVOD njengeNetflix kunye ne-Hulu iyaphazamisa. Kwikota yesine ye-2018, i-Netflix eyongeziweyo I-1.53 yezigidi ezibhaliswe kubhaliso kwi-US kwikota yokugqibela ye-2018, ngoxa i-Hulu isanda kufika I-25 yezigidi ababhalisile
Ukukhula ngokukhawuleza kokuqukethwe kwevidiyo kwi-US kukuguquka okukhulu ukusuka kwiintsuku xa iintetho ziza kubuthana nge-TV. Kodwa kukho imingeni efuna ukuyitshintsha. Eyona nto ihamba phambili, umlambo ophilayo ungabonisa imifanekiso esemgangathweni enobungqina obonakalisa umbukeli. Kodwa ekuhlaleni kwayo kunokuba kuqhutywe ngeplxelation kunye ne-buffering, enokuba ngumthombo ogqithiseleyo wokuphazamiseka nokuphazamisa amava e-intanethi. Icandelo lomxholo ludinga ukujongana nale ngxaki kunye nokuhambisa imilambo enomgangatho ofanayo njengoko usasazo, kwimigudu yokuphucula nokwahlula inkonzo yabo kwiindawo ezikhuphisanayo zokukhuphisana. Abaphuhlisi baya kudlala indima ephambili ekuncedeni ukufezekisa oku, kwaye kuya kufuneka bajolise ekugxileni kwezobuchwepheshe bokuqala.
Ukusasazwa kwekhwalithi ephezulu yeVOD
Ngelixa iteknoloji isetyenzisiwe ngabadlali abakhulu be-SVOD ngexesha elithile, ubuninzi beli shishini alisekho ukuhambisa ukusasazeka ukuze unikeze umxholo wenkcazo ephakamileyo, kwiqhezu le-bitrate esetyenziswa ngokubanzi kwisicelo. Le nkqubo, ebizwa ngokuba yi-Per-title Encoding, isebenzisa uhlalutyo oluyinkimbinkimbi yeefa ukubala i-ladrate ye-bitrate, eyona thembhile equlethe ukuhlanganiswa kwe-bitrate / isisombululo.
Nangona kunjalo, oku kulula ukutsho kunokuba kwenziwe: ezininzi iinkonzo ezinxulumene nevidiyo zisasebenzisa amanqanaba e-Bitrate ngaphandle kokusebenzisa ukucwangciswa okusekelwe kwisiseko. Ukusebenzisa i-Per-title Ukubhalisa ngokufanelekileyo, abaphuhlisi kufuneka baqaphele ukulungelelaniswa okusemgangathweni phakathi komgangatho wezithombe ezibonakalayo kunye ne-bitrate, kwaye kubo baqinisekise ukuba umxholo ujongene nale methrikhi. Le ndlela iyanciphisa kakhulu i-bitrate ngaphandle kokunyaniseka kumgangatho womfanekiso, xa kuthelekiswa namaphrofayili afanelekileyo okufakela ikhowudi.
Ngale teknoloji, imibutho yobukhulu bonke e-US iya kuba nokwazi ukwandisa inkonzo yayo, okubangele ukuphucula ngokubanzi kumava othengi kuwo wonke umxholo womxholo - ukusuka kwimiboniso yefilimu ukuya kudlala imidlalo.
Sisanda kukhupha yethu minyakaIngxelo yoMqhubi wevidiyo', apho sathethathethana nabaphuculisi be-450 emhlabeni wonke ukuba babuze ngemingeni yabo enkulu kunye neendawo zokutyalomali ze-2019. Sifumene ukuba i-latency yayiyinkalo enkulu kunazo zonke kubathuthukisi bevidiyo kwi-2018 kungakhathaliseki indawo yabo, ukufikelela kwiinqununu eziphakamileyo okanye kwindawo yolwazi.
Imidlalo ebukhoma ngokuqinisekileyo iyona sicelo esinzima kakhulu kwividiyo ye-intanethi: ukunyakaza kuqhubekayo, oko kuthetha ukuba isakhelo ngasinye siya kunika iinkcukacha ezongezelelweyo ngokumalunga neyokugqibela; kwaye abalandeli balindele umgangatho ophezulu. Le miqobo emibini idibanisa ukwandisa inani leedatha ezifunekayo ukuba zithunyelwe kwi-intanethi xa kuthelekiswa nezinye izicelo ezifana neethathu. Nangona kunjalo, amandla othungelwano aphelile, oku kubangela ukuba amapakethe angabambelela kwiindlela zabo zokuhlaziywa kwakhona. Oku kuya kuba yintlanzi, engavumelekanga kwinkqubo ephilayo.
Kule nto, isisombululo sisekusetyenzisweni izixazululo ezichanekileyo zevidiyo ezitshintsha izicwangciso ngexesha lokwenene, ukunciphisa i-latency ngeli xesha ligcina nevidiyo ephakamileyo. Oku kuya kukukholisa ngokukhethekileyo abaninzi abalandeli ababukela imidlalo ekhompyutheni ekhompyutheni ekhompyutheni, endiqinisekisileyo ukuba abayikuvuyela xa behlala beva intliziyo yommelwane wabo olandelayo uTom Brady ngaphambi kokuba babone i-touchdown.
I-AV1 kunye nehlabathi le-multi-codec
Ukuqaliswa kwe-codec entsha kuyenza rhoqo ihloko. Nangona kunjalo, i-AV1 ivele ngenxa yezizathu zibini: ifuna ukuba iqhube i-UHD ngokukhawuleza kunokuba nayiphi esinye isisombululo esivela kwiimarike, kwaye yayingenasidlangalaleni-ngokuphumelelayo ukuphakamisa inkundla yokudlala ngokutsha kunye nokuvumela imibutho encinci ukuba ikhuphisane namashishini amakhulu ngokusebenzisa ezintsha.
Uphuhliso olumnandi 'kwiNgxelo yethu yonxibelelwano lwevidiyo' kukunyuka kwinjongo yonjiniyela ukuhambisa i-codec kunye phantse kwisithathu kubo bonke abaphenduliweyo. Oku kuphindwe kabini izinga lokusetyenziswa okucwangcisiweyo (iipesenti ze-14) zengxelo yethu yangaphambili, kubonisa ukuba ngumncintiswano onzima ukuseka ii-codec ezifana ne-H.264 kunye ne-HEVC. Kuya kuqala ukukhishwa kwiinkonzo ze-VoD ze-premium kuqala, ukwenzela ukuba ababoneleli bazisasaze iindleko zokuqulunqa izibonelelo ngelixa i-marketer ebanzi ithatha ukuthotyelwa kwamanzi kwi-codec. Nangona kunjalo, kusekuqaleni ukutsho ukuba iya kutshintsha ezinye i-codec. Ngokubanzi, i-2019 iya kukhawulezisa umkhangeli kwihlabathi le-multi-codec njengoko bonke abanikezeli bokuqukethwe bekhetha isisombululo esihle kwiimeko ezahlukeneyo.
Kulo nyaka, silindele ukuba imidlalo eqhubekayo iza kuthunyelwa kumafestile, ii-studios ezininzi ziza kuzisa iinkonzo zokusakaza kwi-intanethi ngqo kunye nabasebenzisi bevidiyo kunye nevidiyo yomculo iya kuqhubeka ikhula. Ngokudibanisa i-encoding engcono kunye ne-latency eyancitshisiwe kunye nohlu olubanzi lwazo zokukhetha kwi-codec ukuba ukhethe kuzo, icandelo leendaba liza kukwazi ukuhambisa kwisithembiso sevidiyo yamavidiyo ekhompyutheni edibeneyo ngokusasazwa komgca.
Umlawuli weMveliso yoBunjineli boMsindo - Oktobha 13, 2019
Injini yeVidiyo yosasazo, ukuSebenza kwevidiyo yeSizwe - Oktobha 13, 2019
Isicwangciso sobuchule seDijithali - Oktobha 13, 2019
2015 Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie ukunciphisa kwebhitrate Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli H264 / H265 eye HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC ukunciphisa ingxolo UHD / 4K / HD I-Ultra HD Forum viarte Injini yeVidiyo ndiphila Warsaw	2019-04-24
Previous: I-RED R3D® SDK I-NVIDIA CUDA-Ukukhawuleza kokusebenza kweNkqubo ngokufumaneka
next: LiveU ukuya kumandla kwi-studio ye-TNW yeTV kwi-TNW2019, kwiNtsebenziswano kunye noMsinga weMeko yam